A BuddhismworldAdmin၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
A BuddhismworldAdmin's Apps
A BuddhismworldAdmin's Likes
A BuddhismworldAdmin's ၏မိတ်ဆွေများ
ထင်လင်းအောင် သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Nan Nwe Nwe Aye liked A BuddhismworldAdmin's group မေတ္တာပို့ ရန်နေရာ
Nan Nwe Nwe Aye liked A BuddhismworldAdmin's group ၀ိပဿနာရှူနည်းများလေ့လာနိုင်ရန်..
မောင်မောင်မင်းသား သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဆရာတော်ကြီးများ၏ တရား ...Mp3' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဝင်းပပ​အေး liked A BuddhismworldAdmin's group ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်(သာသနာဟိတအသင်း)
Ni Htwe liked A BuddhismworldAdmin's group ၀ိပဿနာရှူနည်းများလေ့လာနိုင်ရန်..
အောင်မျိုးထွန်း သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဖြူးဆရာတော်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
MinChanSike သည် A BuddhismworldAdmin's ၏ 'မေတ္တာပို့ ရန်နေရာ' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
MinChanSike joined A BuddhismworldAdmin's group
Tin Win Naing joined A BuddhismworldAdmin's group
ထွန်းထွန်းဝင်း သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ပုဗ္ဗဏှသုတ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
panchitthu သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဘလော့တင်နည်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Nyi Nyi Zaw သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ '( ဆွေးနွေးခန်းစည်းကမ်းချက်များ)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
sayarchit သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဓာတ်တော်ခွဲဝေခန်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ထွန်းထွန်းဝင်း joined A BuddhismworldAdmin's group
tin aung bo သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'မုသာနဲ့ပရိယာယ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Shein liked A BuddhismworldAdmin's page ငါးပါးသီလ ရှင်းလင်းချက်
tin aung bo သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'အကြွေးကင်းမှ ရဟန်းခံရမှာလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
.............. http://api.ning.com/files/7U-JG7rftqT8znURiyHkPpQ1OGP9W6iuVY2iEwUV8MWSCjDAdVpV4InfCOCRC2yDo3fFD5AY8WIfGIkgk9IwG09Y08oZUmkL/novemberbudda1.swf ............... http://api.ning.com/files/7U-JG7rftqT8znURiyHkPpQ1OGP9W6iuVY2iEwUV8MWSCjDAdVpV4InfCOCRC2yDo3fFD5AY8WIfGIkgk9IwG09Y08oZUmkL/novemberbudda1.swf
A BuddhismworldAdmin's ၏ဓါတ်ပုံများ
Red Ribbon From 28rn8ya0zve1w Red Ribbon From Δℓωαʏƨ βʏɛ Red Ribbon From ကလေးတို.ဆရာမ Red Ribbon From Peaceangel Red Ribbon From 028sw6kmlz064 Red Ribbon From 31qup36pp95ti
A BuddhismworldAdmin ကိုလက်ဆောင်ပေးရန်နေရာ။
A BuddhismworldAdmin's Videos
Added by A BuddhismworldAdmin2Comments3Likes
Added by A BuddhismworldAdmin0Comments 1 Like
Added by A BuddhismworldAdmin 1 Comment 1 Like
A BuddhismworldAdmin's Groups
A BuddhismworldAdmin's Discussions
Started this discussion. Last reply by စိုးလေး Sep 8, 2013. 123 Replies 18 Likes
Started this discussion. Last reply by ဦးအောင်မြင့် Mar 26, 2015. 48 Replies0Likes
Started this discussion. Last reply by နီစံ (အနီ) Dec 19, 2011. 45 Replies7Likes
Started this discussion. Last reply by 28iphp0zoe5yk Aug 21, 2011. 41 Replies 1 Like
Started this discussion. Last reply by zwelay Mar 4, 2012. 37 Replies3Likes
A BuddhismworldAdmin's Blog
ဒီဘလော့ကို မတ် 28, 2013 တွင်11:44pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments6Likes
ဒီဘလော့ကို မတ် 22, 2013 တွင်10:33pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်လေးကို Android ဖုန်းတွေအတွက်(APK)
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 11, 2012 တွင်3:12am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 10 Comments 14 Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 23, 2012 တွင်8:50am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 18 Comments 20 Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 22, 2012 တွင်11:42pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments 10 Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 22, 2012 တွင်11:33pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။7Comments6Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 22, 2012 တွင်11:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 22, 2012 တွင်11:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 8 Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို မေ 20, 2012 တွင်7:46pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments6Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 18, 2012 တွင်12:39am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်1:49am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments7Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်1:41am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်1:37am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments4Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်1:31am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်1:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments5Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်1:23am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 17, 2012 တွင်12:58am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments4Likes
ပဋိစ္စသမုပ်ပါဒ် စက်ရဟတ် ဆိုသည်မှာ
ဒီဘလော့ကို မေ 13, 2012 တွင်12:22am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments3Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 5, 2012 တွင်11:11pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments 1 Like
ဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ တရားတော်များ
ဒီဘလော့ကို မေ 4, 2012 တွင်10:37pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments0Likes
5:45pm အချိန်ဇူလှိုင် 4, 2016, တွင် အ၇ူးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:04pm အချိန်စက်တင်ဘာ 13, 2015, တွင် မောင်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:21am အချိန်အောက်တိုဘာ 13, 2014, တွင် maythu မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:57am အချိန်မေ 28, 2014, တွင် ခင်လေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:43pm အချိန်မတ် 16, 2014, တွင် ပိသေးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ၀က်ဆိုဒ်ရဲ့ သန္ဒာ့စာမျက်နှာကို ဒီဆိုဒ်ကနေဖယ်ပေးစေချင်လို့ပါ . . .သန္ဒာကလည်း မလုပ်တက်လို့. .. ဆိုဒ်တာဝန်ခံအနေနဲ့ဖယ်ပေးလို့ရမလားလို့. . .ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဆိုဒ်စာမျက်နှာဖျက်နည်းသိချင်လို့ပါ. . .thandarlinn06@gmail.com နဲ့ password က( Adore you. )ပါ. . .တစ်ချက်လောက်ကူညီပါနော်. . .မသုံးဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ မထားခဲ့ချင်လို့. . .
ကျေးဇူးပါ. . .
12:13pm အချိန်အောက်တိုဘာ 7, 2013, တွင် Thida မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မဟာစည်ဆရာတော်ရဲ့ ဝိပဿနာတရားရူနည်း လေးကိုလိုချင်ပါတယ်ရှင့် ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ ဒီဆိုဒ်မှာများရှိမလားရှင့်
6:22pm အချိန်စက်တင်ဘာ 12, 2013, တွင် မေတ္တာရှင်မလေးရှင်းသန့်မေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:27pm အချိန်သြဂုတ် 31, 2013, တွင် ခင်သက်ဆွေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:26am အချိန်သြဂုတ် 16, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟုတ်ညီ...ညီရဲ့မေးကို လက်ခံရရှိပါတယ်...။ အတက်နိုင်ဆုံး အစ်ကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်။
4:36pm အချိန်မေ 1, 2013, တွင် ပိသေးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:02pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 17, 2013, တွင် ကျော်လွင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:14pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 31, 2012, တွင် + မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:02am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 19, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီရေ ချက်ဘောက်က လုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ ကိုယ်ရိုက်တဲ့စာလုံးကိုလဲ မည်းနေတောမှန်မမှန် အလွယ်တကူမသိနိုင်ဘူး။ နောက် အပြာရောင်စာလုံးတွေက သေးပြီးတော့ မျက်စိကျိန်းတယ် ဖတ်လို့အဆင်မပြေဘူးညီ။ ပြန်ပြင်လိုက်ပါအုံး...။
8:47pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 2, 2012, တွင် လွမ်းဧကရီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မရောက်တာကြာလို့လာလည်သွားပါတယ်။
5:29pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 22, 2012, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:10pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 22, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:25pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 4, 2012, တွင် မေသူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကိုကောင်းမြတ်မင်းရေ ... လာလည်သွားပါတယ်နော်
အခုလို လူသားအကျိုးမျှော်ကိုးပြီး ဒီဆိုက်လေးတည်ထောင်ထားပေးလို့ အရမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသားဖြစ်မိပါတယ်အကို။ ဆက်လက်ပြီး ဘာသာ သာသနာအကျိုးကို ဆထက်ထမ်းပိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ... ညီမတို့လိုအသစ်တွေကို လည်း လက်တွဲခေါ်ပေးပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8:29am အချိန်နိုဝင်ဘာ 2, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါညီ....အသင်းအလှူလေးမှာ သာဓုလေး လာခေါပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်
3:35pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 1, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မတွေ့ တာကြာလို့ လာလယ်ပါတယ် အားလုံး အဆင်ပြေရဲ့ လား ....
4:05pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။